शमूएलका, राजाका र इतिहासका पुस्तकहरू – Word of Truth, Nepal
शमूएलका पुस्तकहरू –
अब हामी यी छओटा पुस्तकहरूमध्येका पहिलो जोडी – अर्थात् शमूएलका दुई पुस्तकहरूको बारेमा विचार गर्न तयार भएका छौं। पहिलो शमूएलको पुस्तकले हामीलाई इस्राएलको प्रथम राजा अर्थात् शाऊलको बारेमा बताएको छ। दोस्रो शमूएलको पुस्तकले हामीलाई इस्राएलका दोस्रो राजा अर्थात् दाऊदको बारेमा बताएको छ।
यी पुस्तकहरू किन “शमूएल” को नाउँले जनाइन्छन्?
शमूएलका पुस्तकहरूको चाबी पद १ शमूएल २:३० मा पाउँछौं। विशेष गरी उक्त पदको आखिरी भागलाई हेर्नुहोस्: “मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु, र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्।” परमेश्वर यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? यस पदमा राम्रो पक्ष (आशिष) पनि छ, नराम्रो पक्ष (श्राप) पनि छ:
आशिष: “यदि तपाईं परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईंलाई आदर गर्नुहुनेछ।” परमेश्वरलाई आदर गर्ने व्यक्तिले परमेश्वर ज्यादै मूल्यवान् र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी मान्दछ। उसले भन्छ, “परमेश्वर यति महान् हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो निम्ति यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ कि मैले जीवनपर्यन्त उहाँका कुरालाई विश्वास गर्नैपर्छ र उहाँको आज्ञापालन गर्नैपर्छ।”
श्राप: यदि कसैले परमेश्वरलाई आदर गर्दैन र उहाँलाई तिरस्कार गर्छ भने परमेश्वरले उक्त व्यक्तिलाई कम महत्त्वको ठान्नुहुन्छ र उक्त व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको आशिष हुँदैन। यो व्यक्तिले भन्छ, “परमेश्वर मेरो लागि कुनै महत्त्वको हुनुहुन्न। परमेश्वरले जे भन्नुभएको भए तापनि मलाई खासै मतलब छैन। परमेश्वरले भन्नुभएका कुरा मेरा लागि ज्यादै कम महत्त्वका छन्!”
राजाहरूका पुस्तकहरू –
टिप्पणी: वर्णाक्रममा “शा” भन्दा “या” पहिला आएजस्तै समयमा “एलिशा” भन्दा “एलिया” पहिला आएका थिए।
उनी खराब राजा थिए (“खराब गरे”) कि असल राजा थिए (“असल गरे”)
राजाका यी दुई पुस्तकहरूको चाबी पद १ राजा १८:२१ हो। बाल देउतालाई पूजिरहेका मानिसहरूलाई एलियाले दिएको चुनौती यस प्रकार थियो: “यदि _____________ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई _____________। तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछ्याओ।”
उत्तरी राज्यमाथिको विपत्ति: “इस्राएलीहरू यारोबामका सबै _____________मा लागिरहे, र ती त्यागेनन्, जबसम्म परमप्रभुले आफ्ना सबै दास अगमवक्ताहरूद्वारा _____________ ____________ तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट _________________। यसैले इस्राएलका मानिसहरू आफ्नो मातृ-भूमिबाट ___________ देशमा ___________ भएर ___________, र तिनीहरू अझै पनि त्यहीँ छन् (२ राजा १७:२२-२३)।” इतिहासमा यसलाई अश्शूरी कैद (Assyrian Captivity)भनिन्छ।
दक्षिणी राज्यमाथिको विपत्ति: “त्यहाँ हमातका देशको रिब्लामा ___________का राजाले तिनीहरूलाई मार्न लाए। यसरी _________ आफ्नो देशबाट ______मा _________ (२ राजा २५:२१)।” इतिहासमा यसलाई बेबिलोनी कैद (Babylonian Captivity) भनिन्छ।
राजाहरूमध्ये धैरैजनाको यही समस्या थियो। इस्राएलका सबै नै राजाहरू र यहूदाका धेरैजसो राजाहरूले मूर्तिहरू (झूटा ईश्वरहरू) को सेवा गरे। धेरैजना “असल” राजाहरूले समेत “अल्गा-अल्गा ठाउँहरू” लाई हटाएनन् (जस्तै, २ राजा १५:३-४ मा पढ्नुहोस्)। यी “अल्गा-अल्गा ठाउँहरू” मूर्तिपूजाका थानहरू थिए जो डाँडाहरूहुँदो स्थापना गरिएका थिए। यी मूर्तिपूजाका थानहरू पूरै नष्ट गरिनुपर्थ्यो। प्रायःजसो राजाहरू त्यसो गर्न राजी थिएनन्। के हिजकिया राजा प्रभुलाई पूरै पछ्याउन राजी थिए (जस्तै २ राजा १८:४-६ मा पढ्नुहोस्)? _____________। तिनीहरूले मूर्तिपूजा गरेका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई इन्साफ गर्नुभयो। यही नै थियो तिनीहरूलाई कैद गरी निर्वासनमा लगिनुको कारण (२ राजा १७:९-१२)।
के परमेश्वर साँच्ची नै परमेश्वर हुनुहुन्छ? के उहाँ साँच्ची नै सारा सृष्टिका राजा हुनुहुन्छ? के उहाँ साँच्ची नै तपाईंको मुक्तिदाता र प्रभु हुनुहुन्छ? यदि परमेश्वर साँच्ची नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउनुहोस्। बाइबलले हामीलाई आज्ञा गर्दछ, “आफूलाई _______________बाट जोगाइराख (१ यूहन्ना ५:२१)।” यसको मतलब हामीले आफूलाई असत्य र गलत कुराहरूबाट जोगाउनुपर्छ अनि सत्य परमेश्वरलाई पछ्याउनुपर्छ। परमेश्वर यदि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने उहाँकै सेवा गर्नुहोस्। के थेस्सलोनिकीका विश्वासीहरूले त्यसो गरे (१ थेस्सलोनिकी १:९)? ___________। के तपाईंले त्यसरी नै गर्दैहुनुहुन्छ? ___________। एक व्यक्तिले परमेश्वरलाई कसरी पछ्याउन सक्दछ (यूहन्ना ८:१२)? ___________________________ _________________। एक व्यक्तिले कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दछ? प्रायःजसो राजाहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो राजा बनाएनन्। के तपाईंचाहिँ प्रभुलाई आफ्नो जीवनका राजा बन्न दिनुहुन्छ?
इतिहासका पुस्तकहरू –
यस अध्यायको शुरुमा तालिकामा देखाइएअनुसार इतिहासका दुई पुस्तकहरूले शमूएलका र राजाका पुस्तकहरूकै कालखण्डलाई समेटेका छन्। तिनमा अन्य विवरणहरू थप्न र परमेश्वरको दृष्टिमा कुन-कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् भनी प्रस्ट्याउन अघिबाटै शमूएलका र राजाका पुस्तकहरूमा उल्लेखित विषयवस्तुलाई उहाँले यहाँ फेरि दोहोर्याउनुभएको पाइन्छ। यी दुई पुस्तकहरूमा ऐतिहासिक घटनाहरूलाई समयको आधारमा मेलैसित क्रमिक र विस्तृत रूपमा बयान गरिएको हुनाले यी लेखोटहरूलाई “इतिहासका पुस्तकहरू” को नाउँले जनाइएका छन्। राजाहरूको कालखण्डको बारेमा हामीलाई आवश्यक ज्ञान मिलोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई त्यसबेलाको ठीक-ठीक इतिहासको अभिलेख यी दुई पुस्तकहरूमा दिनुभएको छ।
इतिहासका पुस्तकहरूको चाबी पद २ इतिहास १६:९ मा पाइन्छ: “किनकि जसका हृदय उहाँप्रति ___________ छन्, तिनीहरूलाई _____________ दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको __________ रहिरहन्छ।” यसको आखिरी भागलाई हिब्रूअनुसार अक्षरशः यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ: “…सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुका आँखाहरू यताउता दगुर्छन्”। परमेश्वर, उहाँलाई आदर गर्न चाहनेहरू र उहाँलाई पूरै पछ्याउन चाहनेहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। यो अचम्मको पदअनुसार परमेश्वरका आँखाका खुट्टाहरू छन् (ती दगुर्छन्!)। हुन त, परमेश्वरका न आँखा छन्, न खुट्टा, तर यस पदले हामीलाई यो बताउँदैछ कि परमेश्वर अति राम्ररी देख्नुहुन्छ र जता पनि सजिलैसँग पुग्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँलाई आदर गर्ने व्यक्तिहरू भेट्टाउने काममा परमेश्वर विशेषज्ञ नै हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरप्रति झुकाव राख्ने तपाईको हृदय छ भने र त्यो परमेश्वरप्रति भक्त छ भने यसमा निश्चित हुनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईंलाई भेट्टाउनुहुनेछ र परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष दिनुहुनेछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:08:092020-04-28 14:35:01शमूएलका, राजाका र इतिहासका पुस्तकहरू
यहोशू, न्यायकर्ता, रूथ एज्रा, नहेम्याह र एस्तर